Yintoni i-CNMV | Ezezimali
Encarni Arcoya | 23/09/2021 17:03 | Ukuhlaziywa ukuba 30/09/2021 17:27 | Uqoqosho ngokubanzi
Ngokuqinisekileyo ngamanye amaxesha ukhe weva nge-CNMV. Nangona kunjalo, loo magama afanayo afihla into ebaluleke kakhulu, Ngaba uyazi ukuba yintoni i-CNMV?
Apha ngezantsi siyacacisa ukuba libhekisa phi eli qumrhu, yintoni imisebenzi yalo, liyilwa ngubani, ithini imimiselo yalo kunye namanye amanqaku ekufuneka uwaqwalasele.
1 Yintoni i-CNMV
2 Imisebenzi ye-CNMV
3 Ngubani owenza i-CNMV
3.2 Ikomiti eLawulayo
3.3 Ikomiti yeengcebiso
4 Ngubani olawulayo
5 Imigaqo ye-CNMV
I-CNMV sisichazi esithi zibandakanya iKhomishini kaZwelonke yoThengiso lwezoKhuseleko. Ngamanye amagama, liziko elinjongo zalo ikukujonga iimarike zokhuselo eSpain kwaye ezi zihambelana nokusebenza kunye nemigaqo ekuvunyelwene ngayo.
Ngokwe-RAE, eli ziko licaciswe ngolu hlobo lulandelayo:
“Igunya elilawulayo elizimeleyo elinjongo zalo kukujonga nokuhlola iimakethi zokhuselo nomsebenzi wabo bonke abantu bendalo nabasemthethweni ababandakanyekayo kuthutho lwabo, ukusebenzisa kwabo igunya lokohlwaya neminye imisebenzi enokuthi inikwe yona. umthetho. Ngokunjalo, iqinisekisa ukungafihli kweemarike zokhuselo, ukwenziwa ngokuchanekileyo kwamaxabiso kuzo kunye nokukhuselwa kwabatyali mali, kukhuthaza ukuhanjiswa kwalo naluphi na ulwazi oluyimfuneko ukuqinisekisa ukufezekiswa kwezi njongo ”.
I-CNMV yenziwe xa ifayile ye- Umthetho 24/1988, weNtengiso yeStokhwe, Oko kucinge ukuba luhlaziyo lonke kwinkqubo yezemali yaseSpain. Kule minyaka idlulileyo, ihlaziyiwe ngemithetho eyayivumela ukuba ivumelane nezicelo kunye noxanduva lwe-European Union, kude kube ngoku.
Ukususela ngalo mzuzu, omnye wemisebenzi yayo kukuqokelela ulwazi malunga neenkampani ezidweliswe kwiStock Exchange, kunye nemicimbi yezokhuseleko eyenzeka eSpain, ukongeza ekubekeni iliso kwezi ntshukumo zenzeka kwimarike okanye zikhonza abatyali mali. Nangona eneneni banemisebenzi emininzi.
Singathi Eyona njongo iphambili ye-CNMV, ngaphandle kwamathandabuzo, kukulawula, ukulawula nokulawula zonke iimarike zokhuselo ezisebenza eSpain, ukuze kuqinisekiswe ukhuseleko, isolvency kunye nokukhuselwa kwamanani angenelelayo kuyo. Nangona kunjalo, lo msebenzi awukho lula, kwaye ayisiyiyo kuphela oyenzayo.
Kwaye kukuba, ukongeza koku kungasentla, inezinye iintlobo zemisebenzi, enjengokunikezela nge-ISIN (iNombolo yoKhuselo lwaMazwe ngaMazwe) kunye neCFI (Ukwahlula izixhobo zeMali) iikhowudi kwimicimbi yezokhuseleko eyenziwa eSpain.
Ikwasebenza ukucebisa uRhulumente kunye noMphathiswa wezoQoqosho, ukongeza ekuthatheni inxaxheba ngokukuko kumaziko aphesheya.
Kwiwebhusayithi yayo sinokubona imisebenzi kunye nendlela yokusebenza kwale Khomishini ngokubhekisele kwiimarike zaseprayimari nezesekondari, ukupheliswa, ukuhlawulwa kunye nokubhaliswa kwezokhuseleko kunye ne-ESI (iiNkampani zeeNkonzo zoTyalo-mali) kunye ne-IIC (iiNgxowa-mali kunye neeNkampani zoTyalo-mali ).
Ngubani owenza i-CNMV
Ubume be-CNMV yenziwe Iintsika ezintathu ezisisiseko: iBhunga, iKomiti yeeNgcebiso, kunye neKomiti Elawulayo. Nangona kunjalo, kukwakho nabalawuli abathathu ngokubanzi, bokujonga amaziko, ukubekwa kweliso kwimakethi kunye nenkonzo yezomthetho.
Ukucacisa nganye nganye esinayo:
IBhodi iphethe onke amagunya e-CNMV. Yenziwe:
Mongameli kunye noSekela Mongameli. Aba bonyulwe nguRhulumente ngoMphathiswa wezoQoqosho ongoyena ubancomelayo.
UMlawuli Jikelele weSebe lezeMali kunye noMgaqo-nkqubo wezeMali kunye noSekela-Rhuluneli weBhanki yaseSpain. Bangabacebisi abazelweyo.
Abacebisi abathathu. Bonyulwe nguMphathiswa wezoQoqosho.
Nobhala. Kule meko, eli nani linelizwi, kodwa akukho voti.
Phakathi kwemisebenzi eyenziwa liBhunga yile:
Vuma iisetyhula (ezivela kwinqaku le-15 loMthetho 24/1988, kaJulayi 28), iMigaqo yangaphakathi ye-CNMV, uhlahlo-lwabiwo mali lokuqala lweKhomishini, iingxelo zonyaka ngokwenqaku 13 loMthetho 24/1988, kaJulayi 28, kunye Inqaku 4.3 lale Mimiselo kunye neNgxelo yomsebenzi wokuphatha we-CNMV. Iya kujongana nokuchonga nokugxotha abalawuli ngokubanzi kunye nabalawuli beSebe, kunye nokuseka iKomiti Elawulayo kunye nokunyusa iiakhawunti zonyaka kuRhulumente.
Oku kwenziwa ngumongameli kunye nosekela mongameli, ooceba abathathu kunye nonobhala. Phakathi kwemisebenzi yayo yile:
Lungiselela kwaye ufunde imicimbi eza kungeniswa yiBhodi ye-CNMV, ufunde kwaye uvavanye imicimbi kusihlalo, ulungelelanise amanyathelo namabhunga olawulo eKhomishini, uvume ukufunyanwa kweKhomishini yeempahla kunye nokusombulula ugunyaziso lolawulo.
Yenziwe ngumongameli, oonobhala ababini kunye nabameli beziseko zophuhliso zentengiso, abanikezeli, abatyali mali kunye namatyala nezinto zeinshurensi. Ikwabandakanya abameli bamaqela obuchwephesha, iingcali zodumo oluvunyiweyo, abameli beNgxowa-mali yesiQinisekiso soTyalo-mali kunye noluntu oluzimeleyo olunemarike yesibini esemthethweni.
Ngaphandle kwala manani makhulu, i-CNMV ineCandelo loLawulo oluBanzi lwamaZiko, elinye liMakethi, elinye eleNkonzo yezoMthetho, elinye loMgaqo-nkqubo weQhinga kunye neMicimbi yeHlabathi. Ukongeza kwiSebe loLawulo lwangaPhakathi, iiNkqubo zoLwazi, iCandelo lezoNobhala Jikelele kunye neCandelo loNxibelelwano.
Ngoku uyazi okungakumbi malunga ne-CNMV, Ngaba uyafuna ukwazi ukuba ngoobani abantu kunye / okanye iinkampani ezilawulayo? Ngokukodwa sithetha malunga:
Iinkampani ezikhupha izabelo kuzo zombini iimarike zaseprayimari nezesekondari.
Iinkampani ezibonelela ngeenkonzo zotyalo-mali.
Oko kubizwa ngokuba ziinkampani zefintech.
Iinkampani zotyalo-mali oluhlangeneyo.
Oku kuvumela abatyali mali ukuba bafumane inkxaso yeli ziko xa betyala imali kwimarike yemasheya ngazo zonke iziqinisekiso kunye nokhuseleko.
I-CNMV ilawulwa yimimiselo emibini, leyo ilawula umsebenzi olungileyo walo mzimba. Kwisandle esinye, Imigaqo yangaphakathi ye-CNMV. Kwelinye, ikhowudi yokuziphatha.
Ewe kunjalo, akufuneki ukuba silibale ngomthetho 24/1988, kaJulayi 28, kwiStock Market, kunye notshintsho lwayo kwimithetho elandelelanayo.
Ngaba ngoku icacile kuwe yintoni i-CNMV?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Yintoni i-CNMV